Home / Foset Guide / Etu ị ga-esi họrọ igwe mmiri kwesịrị ekwesị
2020 / 11 / 18 nhazi ọkwaFoset Guide 4279 0
Mgbe obula ichoro idozi ime ụlọ ịwụ ahụ, ị ​​na-eche ọtụtụ mkpebi ihu. You ga-arapara n’arụ ọhụrụ ma ọ bụ hazigharịa ya? Kedu usoro mmemme ị ga-achọ iji? Kedu ihe ndozi ị ga-achọ itinye? N'efu gị onwe gị kwa, ị ga-achọ ikpebi site na kichin kichin kachasị mma site n'ụdị nkeji ịchọrọ. Ọzọkwa, ịkwesịrị iburu ọkpọkọ ime ụlọ ịwụ.
Iji nyere aka na mbọ gị iji nyere aka mee nhọrọ kachasị mma, lee anya n'ihe ịchọrọ ịmara mgbe ị na-ahọrọ ụlọ ịwụ ahụ ego faucets online.
ỌR in na ịhọrọ athlọ mposi
Ime ụlọ ịsa ahụ bụ ụdị atụmatụ ị na-anaghị ahụkarị ruo mgbe ị na-agbanwegharị mpaghara ahụ. Ezubere iji chịkwaa otu na ebe mmiri nkịtị na-agagharị na nsị, ọkpọkọ bụ ihe ndozi ụlọ ịsa ahụ dị mkpa, mana ha dị n'ọtụtụ ihe na aghụghọ. Nye ọtụtụ ndị, ọkpọkọ ọkpọkọ bụ ihe eji emecha ime ụlọ ịsa ahụ. Kedụ ka ị ga - esi kpebie maka ihe ọ bụla dịka ọ bụ mgbakwunye ma bụrụ ihe achọrọ? Gịnị na ihe omume ị na-atụle mgbe ọ bụla ị na-ahọrọ ụlọ ịsa ahụ kachasị mma maka oghere gị?
Ofdị Fosets Dị
N’ime ụlọ ịsa ahụ a na-eji ọtụtụ ọrụ rụọ ọrụ, e nwere ọtụtụ pọmpụ ndị bụ isi nke kacha daba adaba. Ezie na a ka nwere ụdị ndị ọzọ na-abụghị isi ihe ndị a, nke a bụ ụdị ụdị ọkpọkọ ugboro ugboro:
Sortdị ọkpọkọ a nwere pọpụ na ejiri aka abụọ etinyere na efere, na -emepụta otu ọkpọkọ emere maka sinks nwere oghere pọmpụ atọ edobere 4 sentimita asatọ.
Igwe mmiri na-agbasa agbasa nwere mmiri ọzọ na nkewa agbawa, nke ọ bụla na-agbakwunye onwe ya n'ime oghere atọ na sink.
Otu olulu nwere otu oghere nwere nke ahụ - oghere onye ebe n'ezie nsị ahụ na-agbanye. Dịka imepụta ọdịdị nke oge a, ọkpọkọ ndị a na-echekwa ohere site na iwere obere nke counter-top.
Ihe nkedo nke mgbidi na-ewepu nsị na kichin kpamkpam site na itinye ya na mgbidi mgbidi dị n'elu kichin kichin, kama. Zuru oke maka ite mmiri ma ọ bụ atụmatụ ndị ọzọ na-enweghị oghere ọkpọkọ, ụdị nsị a chọrọ ịnweta mmiri site na mpempe akwụkwọ mgbidi, nke nwere ike ịchọ ụfọdụ ịgbagharị. Ọ bụrụ n ’i nweela pọmpụ gasị n’uche, ọ dị mfe ịzụ nhọta nke ụdị maka ụdị ahụ wee họrọ nke kachasị masị gị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịmabeghị eriri mmiri ị ga-ahọrọ, ị ga-achọ ikpe ikpe n'ihu.
AJ toJS Iji tụlee
Iji chọpụta nke ọkpọkọ dabara gị ime ụlọ ịwụ kacha mma, nke a bụ a set nke ajụjụ ọma uru akafiakde ese gị imewe ọrụ:
Kedu ihe dabara na kichin gị?
Igwe mmiri ị na-eji na-emetụta ọkpọkọ ị ga - ahọrọ n'ihi na ịchọrọ eriri ọkpọkọ dabara na oghere oghere ị nwere. Ọ bụrụ na ị na-emegharị pọmpụ gị na kichin kichin ị nwere obere oge ma ọ bụ na ị na-azụta mmiri ọhụrụ ka ị gaa zụta kichin kichin ọhụrụ, chọpụta kpọmkwem ụdị ọdịiche ịchọrọ ịkwado - otu oghere , centeret, common or mgbidi ugwu?
Kedu atụmatụ ị chọrọ?
Otu n'ime akụkụ kachasị mma nke ahịa mgbata taa bụ nhọrọ gị niile. Youchọrọ ka mmiri pọmpụ dị ala iji maatụ, iji nye aka ichekwa mmiri? Havetụlela onye na - ekwu okwu nke nwere ike belata ị waterụ mmiri ọ normalụ andụ ma belata obere? May nwere ike ịtụle mgbanaka na-enweghị aka nke na-eme ka ịmalite ịmalite mgbe ị na-etinye aka n'okpuru ma kwụsị mgbe ị na-ewepụ ha. Enwekwara ihe eji eme ihe na-eme ka ozone na-arụ ọrụ iji kpochapụ nje bacteria na mmiri nkịtị gị n'ụlọ. Nyochaa nhọrọ iji hụ ihe kacha dị gị mkpa.
Kedu ihu elu ị masịrị?
Ahịa mmiri nke taa na-agụnye ọtụtụ ihe eji emecha: ihe na-egbu maramara, ihe nchara nchara, nickel na-egbu maramara, nickel na-acha odo odo, nickel hammered, igwe anaghị, ọla kọpa, ọla kọpa, ọla kọpa mmanụ, seramiiki tinyere ndị ọzọ. Gaa na ebe a na-ere kichin ma ọ bụ chọọ ụlọ ahịa na-eme n'onwe gị iji chọpụta nhọrọ ma chọpụta nke dị gị mma.
Kedu ego mmefu ego gị?
Ilekwasị anya n’otu ihe ị nwere ike nwere ike ịbụ mpaghara dị mkpa n’ahịa ịzụ ahịa gị, na-enyere gị aka izere ịfefe ego na ịkwa ụta maka mmezigharị gị. Mgbe ị na-eji mmefu ego nke ị guzobere maka ime ụlọ ịwụ ahụ, lee ihe ọkpọ na atụmatụ dabara na atụmatụ ahụ.
Kedu ụdị ọkpọ mmiri a na-eji n'ụlọ ndị yiri ya?
Zọ ọzọ a gbalịrị-na-ezi ụzọ nke na-echezigharị mmụọ nsọ bụ nchọgharị echiche na ụlọ ndị yiri. Gaa na ebe obibi dị na mpaghara gị na ihe ha na-enye - ha na-eche maka otu ụdị ma ọ bụ atụmatụ imi? Nke ahụ nwere ike igosi gị n'ụzọ nke ịchọrọ ịga, kwa.
Mgbe ị dị njikere ịzụrụ foset zụrụ maka ụlọ ịsa ahụ remodel, bịa Modern ụlọ ịwụ. Dị ka'sntanetị na-eduga na-eweta ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-akwụ ụgwọ maka ngwaahịa ụlọ ịsa ahụ, anyị nwere obi ụtọ ịnye ọnụahịa ruru 70 pasent dị ala na ụdị ụlọ ịsa ahụ niile. Zụọ nchịkọta anyị nke ọkpọkọ ntanetị iji nweta nhọrọ zuru oke maka gị.
Nke gara aga :: Etu ị ga - esi ahota ezi mmiri maka bekee gị Osote: Kwụpụ site Ntuziaka Nzọụkwụ na Ndozi na Otu Esi Zụta Ego Ntanetị N'ịntanetị
Ngwakọta na mmepụta usoro nke ọkpọ mmiri ojii
2021 / 01 / 10 860
Ntuziaka na otu esi ahọpụta ezigbo ụlọ ịsa ahụ
2021 / 01 / 10 631
Complete Guide Nzọụkwụ Na Olee otú Iji Wụnye Towel Ring
2020 / 12 / 21 5076
2020 / 11 / 19 4377
2020 / 11 / 19 3987
2020 / 11 / 16 4271